Wire netting amin'ny fanokafana misy lafiny enina manome rivotra tsara sy ny fampiasana fencing. Misy lafiny enina netting tariby na ny fanaka vy Nandika vilana karbaona tariby, Electro na mafana niara-nanatsoboka tafo, dia mifono plastika, na ny tani-hay. Azo noforonina ho gabions baoritra - iray amin'ireo malaza indrindra tariby vokatra ho an'ny fanaraha-maso ny tondra-drano. Ary ny vato apetraka ao. Fametrahan ny gabions hanao manda na banky manohitra rano sy tondra-drano. Misy lafiny enina netting tariby ihany koa ny akoho amam-borona welded ho netting noho ny fanatodizan'ny ny akoho sy ny akoho amam-borona hafa ....
Supply Fahaizana: 3000 Roll / Rolls isam-bolana
Misy lafiny enina Wire netting amin'ny fanokafana manome rivotra tsara sy ny fampiasana fencing. Misy lafiny enina netting tariby na ny fanaka vy Nandika vilana karbaona tariby, Electro na mafana niara-nanatsoboka tafo, dia mifono plastika, na ny tani-hay.
Azo noforonina ho gabions baoritra - iray amin'ireo malaza indrindra tariby vokatra ho an'ny fanaraha-maso ny tondra-drano. Ary ny vato apetraka ao. Fametrahan ny gabions hanao manda na banky manohitra rano sy tondra-drano. Misy lafiny enina netting tariby ihany koa ny akoho amam-borona welded ho netting noho ny fanatodizan'ny ny akoho sy ny akoho amam-borona hafa. Malaza nampiasaina ho fefy aorian'ny mifono maitso, sy ny vola lany dia azo nihena. Tao anatin'ny taona maro, ny misy lafiny enina netting tariby vita amin'ny vy tafo tariby dia ampiasaina amin'ny fefy, FIOMPIANA fanamafisana sy ny fanorenana.
Araka ny fampiharana , dia afaka manome tariby netting ao amin'ny karazana manaraka ireto:
General Tanjona Wire Netting;
Akoho amam-borona Netting;
Wire Netting for fefy.
Misy lafiny enina fanokafana netting tariby voatenona no ampiasaina ho toy ny ankamaroany mazava fencing ny akoho amam-borona, toeram-pambolena, ho an'ny vorona, bitro sy ny biby fiompy fefy, hazo mpiambina sy ny zaridaina fencing, haingon-trano fitehirizana sy ny fanohanana pako tenisy fitsarana. Ampiasaina ihany koa izy io toy ny harato tariby lamba ho fanamafisana mazava ao amin'ny fitaratra sy ny mpisintaka porofo mivaingana simenitra, ny fandalorana ka nametra ny lalana, sns
fanodinana Types misy ny:
• mahitsy fiovana misy lafiny enina tariby netting
• hanova manova tariby misy lafiny enina netting
• roa-tari-dalana ny fonao hieritreri misy lafiny enina tariby netting
Vita ny misy lafiny enina Netting Wire dia mety ho:
• nandrisika rehefa nanenona, nandrisika alohan'ny nanenona,
• PVC mifono tafo
• mafana-niara-nanatsoboka tafo
• Electro nandrisika
General famaritana ny misy lafiny enina Wire Netting
Previous: Square Wire harato
Manaraka: Chain Link Fefy
nandrisika misy lafiny enina Wire harato
PVC mifono Wire harato misy lafiny enina
Wire harato Sheet
Staninless Steel welded harato Panel